Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Sady tsy mahay no tsy menatra
Inty sy nday: Sady tsy mahay no tsy menatra
Taorian’ny “antso” nataon’ireo manamboninahitra jeneraly efa misotro ronono ny vahoaka, ny tafika amperin’asa, ny mpisehatra isan-tsokajiny amin’ny fisahanan-draharaha isan-tokony, hatramin’ny manam-pahefana… mba handray andraikitra amin’izao olana mianjady amin’ny firenena izao dia taitra ny fitondram-panjakana foibe satria nosokajian’izy ireo ho fanentanaa ny vahoaka hanongam-panjakana, angamba, ilay antso. Dia niaka-tseahtra avy hatrany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Rasolofonirina Béni Xavier nanasa ny atidohan’ny olom-pirenena ka nanafoka ny antso nataon’ireo manamboninahitra jeneraly efa misotro ronono ireo. Avy hatrany dia nosokajian’ny minisitra ny Fiarovam-pirenena ho mpanakorontana sy mpampisara-bazana ny tafika izy ireo.
Efa nisy nanao izany tamin’izy ireo, hoy izy, tamin’ny 2002. Nambarany koa fa “hevitr’izy ireo ihany ireny antso ireny fa tsy manan-danja eo anivon’ny fianakaviamben’ny tafika na ny sehatra hafa”. Izany hoe nosokajina’ny fitondram-panjakana ho zava-maivana izany. Zava-maivana ve anefa dia ho nampikoropaka an-dry zareo mpitondra?
Ny tsy azo ikombonam-bava dia ny fihetsik’olona manana andraikitra ambony sady manamboninahitra jeneralin’ny tafika toa an’ingahy Rasolofonirina Béni Xavier, toa izany. Tena tonga amin’ilay fitenenana hoe “sady tsy mahay no tsy menatra”.
Tsy mahay satria fanentanana ny olom-pirenerna sy ny tompon’andraikitra isan-tsehatra mba handray ny andraikiny ve dia heloka sa fahadisoana? Raha miantso ny filohampirenena ve ireo jeneraly efa misotro ronono hoe “raiso ny andraikitrao, Atoa Filoha”, dia mpampisara-bazana ny tafika izany? Raha miantso ny tafika amperin’asa ve izy ireo mba handray ny andraikiny ka mba tsy hataon’ny olona ho herim-pamoretana, dia mpanakorontana?
Raha ny rariny sy hitsiny dia ny minisitra ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier aza no tokony haneho fankasitrahana an’ireo jeneraly efa misotro ronono ireo noho izy ireo tsy tafandrimandry any amin’ny toerana efa isotroany ronono fa mbola manentana ny rehetra handray ny andraikiny amin’izao fahasahiranaa mianjady amin’ny firenena izao.
Sa sanatria ka kobokoboin’ny marana ny minisitra ny fiarovam-pirenena na tonga amin’ilay fitenenana hoe “mitono angaha no mahana” ka mikoropaka amin’ny tsy antony? Sao efa tsapan’ireo mpitondra aza fa efa kely sisa hananan’izy ireo ny toeram-pitavanany ka miaro, mafy an’izany izy ireo?
Maro ange ny feo mandeha eo anivon’ny fianakaviamben’ny tafika fa “misy volabe miainga isan-kerinandro avy eny an-dapa, ka manamboninahitra jeneraly amperin’asa no mandray izany, mba hanambatambazana an’ireo tafika amin’ny ankapobeny, nefa tsy misy mipitika any amin’ireo “tandroka aron’ny vozona” izany fa toa lany manta any ambonimbony any e! Sanatriavin’ny vava ve dia ho isan’ny tafiditra ao anatin’izany ity “be kintana” mahasahy manafoka ny fijoroan’ny tsara sitra-po toa itony manamboninahitra jeneraly efa misotro ronono itony? Aza atakalo tombontsoa manokana re, ry zalahy, ny voninahi-pirenena isaloranareo e! Ary ataovy ho ambonin’ny zavatra rehetra ilay tarigetra hoe “ho an’ny tanindrazana”.